Ramos Oo U Jawaabay Costa Kadib Markii Uu Ugu Hanjabay Inuu La Dagaalamayo Kulanka Madrid Derby %
Dabayaaqadii isbuucii hore ayay ahayd kadib markii uu sheegay weerar yahanka kooxda kubada cagta Athletico Madrid wiilka lagu magacaabo Diego Costa, inuu la dagaalami doono Sergio Ramos, marka ay isaga hor yimaadaan kulanka Madrid Derby.
Madrid Derby, oo kamid ah, kulamada ugu xiisaha badan ee laga dheelo horyaalka La Liga, ee wadanka Spain, ayaa la dheeli doonaa midkiisii labaad ee fasal ciyaareedka maalin Axad ah, oo ay taariikhdu ku beegan tahay 8-da bisha soo socota ee April.
Labadaan kooxood ee kala ah: Real Madrid iyo Athletico Madrid, oo kulankaan wada ciyaari doona, ayaa waxay ku kala jiraan marka laga hadlo shaxda kala horeynta ee La Liga, kaalmaha labaad iyo waliba saddexaad, xili Madrid ay saddexaad tahay.
Hadaba, kabtan Sergio Ramos oo warbaahinta la hadlayay kadib ciyaartii uu xalay qarankiisa Spain uu barbaraha 1-1 ayaa waxaa la weydiyay sheekooyin ku saabsan Ramos, isagoona cod dheer ku sheegay inay yihiin labo saaxiibo oo wanaagsan.
“Waxaan nahay saaxiibo aad isugu dheer,” ayuu Ramos ku jawaabay markii u mid kamid ah saxafiyiinta uu weydiiyay su’aal ku saabsan Costa.
“Xiriirkeena wuxuu ahaa mid wanaagsan sanadihii ugu dambeeyay,” ayuu hadalkiisa kusii daray, Ramos oo daafaca dhexe ka dheela.
Mar la su’aalay inuu Costa horey ugu hanjabay isaga oo uu yiri inuu la dagaalami doono marka la gaaro kulanka Madrid Derby ayuu ku war-celiyay: “Waxaan isku wajahaynaa kulan darbi ah, kadib waan wada dagaalami doonaa, taasina waa mid lawada ogyahay.